Dhacdooyinka – Talo siin loogu talagalay dadka ay saameeyeen Saxaabiga Hoose
Deutsch (German)EnglishFrançais (French)Español (Spanish)العربية (Arabic)Română (Romanian)Русский (Russian)Türkçe (Turkish)فارسی (Persian)Tiếng Việt (Vietnamese)Tigrinya
Talo ku socota dadka ay dhibaatadu soo gaartay
Talo ku socota qaraabada iyo markhaatiyaasha
Sideen kuula talinaynaa?
Waxa la sameeyo ka dib weerar?
Ka warbixi dhacdada
Haddii taariikhda aan la aqoon / aan la ogaan karin: Waqti qiyaas ah
Aroortii Duhur kahor Galabtii Fiidkii Habeenkii
Gobolkee ku nooshahay? *
Woqooyiga-galbeed ee Niedersachsen Waqooyiga-bari ee Niedersachsen Koonfurta Niedersachsen Ma aqaan / kama jawaabayo
Halkee ka mid ah Niedersachsen ayay dhacdadu ka dhacday? *
Goobtee ayay dhacdadu ka dhacday ?
Sidee ayay dhacdadu kuu saamaysay?
Aniga ayay i saamaysay dhacdada. Waxaan qaraabo ama saaxiib la ahay qof uu dambiga saameeyey. Waxaan markhaati ka ahay dambiga. Waxaan ahay shaqaale ka shaqeeya gargaarka degdegga (fal-celiye koowaad). Qaab kale, cadeey
Maxaa dhacay? *
Fadlan sharaxaad ka bixi dhacdada adigoon bixinayn xog shaqsiyeed.
Waa maxay cawaaqibta weerarka?
Alaab/ hanti ayaa la waxyeeleeyey/la burburiyey. Waxaa jiray /jira dhaawacyo jireed. Waxaa jiray/jira cawaaqibyo maskaxeed. Qaab kale, cadeey
Halkan waxaad fursad ugu heysataa inaad si faahfaahsan u sharraxdo waxyeelada iyo cawaaqibta:
Kumaa ku lug lahaa?
dad dembiilayaal ah ayaa ku lug lahaa dambiga.
dadka ayaa saamayn ka soo gaartay dambiga.
Ma garanayo inta qof ee ku lug lahayd iyo/ma ay saamayn ka soo gaartay.
Ma jireen markhaatiyaal ama goob joogayaal?
Haa Maya Ma aqaan
Sidee ayey uga falceliyeen weerarka?
Sidee ayuu dambigu ku bilaabmay? Maxaa dhacay kahor weerarka?
Maxaa dhacay dembiga kadib?
Aragtidaada ahaan, maxaad u malaynaysaa inay kalifeen dambiga?
cunsuriyada Yuhuud nacayb Isir naceyb Mucaarad siyaasadeed Qaab kale, cadeey
Ma jiraan wax raad ah oo ku saabsan dembiilayaasha?
Cabasho ma la soo gudbiyey?
Halkan waxaad ku haysataa xulashada ah inaad liis garayso warbaahinta, warbixinnada ama duubitaanada dembiga (tusaale ahaan warbixinnada wargeysyada, linkiyada, fiidiyowyada, sawirrada, iwm.). Kuwani waa lama daabacayo.
Sanduuqa qoraalka ee loogu talagalay linkiyada
Soo geli faylal
Haddii aad u baahan tahay caawimaad, waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad noo reebto macluumaadka xiriirkaaga. Adeegga latalinta ee Niedersachsen ayaa kula soo xiriiri doona. In aad nala soo xiriirto waa ma ahan qasab oo xogtaada cidna looma gudbin doono.
Waxaan jeclaan lahaa in adeegga latalinta Niedersachsen ee loogu talagalay dadka ay dhibaatada soo gaartay ay ila soo xiriiraan sida soo socota:
Taleefanka Iimayl ahaan Iyadoo la isticmaalaayo farriin sugan (Signaal) Whatsapp Telegram Qaab kale, cadeey
Waxaan cadeynayaa ikhtiyaarinimada iyo saxsanaanta macluumaadkeyga waxaanan adeegga ilaalinta macluumaadka Niedersachsen u ogolahay ka shaqeynta xogteyda.
Sida na noola soo xiriiro:
Gobolka Waqooyiga Galbeed ee Niedersachsen
Telefoonka: 0541 38069923
Moobaylka: 0157 37967272
Gobolka Woqooyiga bari ee Niedersachsen
Telefoonka: 05021 971111
Gobolka Koonfurta Niedersachsen
Moobaylka: 0179 1255333 / 0159 06390203 / 0159 06849290